Ngomhla i-Bitcoin yokuqala idluliselwe | Klever ezezimali
Ngosuku i-Bitcoin yokuqala idluliselwe ngayo
I-Bitcoin yokuqala (i-BTC) yatshintshelwa kwi-Hal Finney, umphuhlisi waseMelika ovela kumyili we-BTC uSatoshi Nakamoto kwi-2009.
Ukusukela ekubeni intengiselwano yokuqala ye-BTC yenziwa kumphuhlisi wesoftware waseMelika IHal Finney, I-BTC isanda kugqiba iminyaka eyi-12 kwinkonzo engaphazamiseki eluntwini.
Ukusukela ekungeneni kunyaka wayo we-13th wenkonzo, itekhnoloji ayizange ibe phantsi. Ngoku ikhokela ugqatso lokwamkelwa kwe-crypto kwihlabathi liphela.
NgoJanuwari 2009, uHal Finney waba ngumntu wokuqala ukufumana i-Bitcoin eyi-10 evela kuSatoshi Nakamoto. Kwakhona wayengumntu wesibini emva kokuba uSatoshi aqhube inethiwekhi yeBitcoin.
Kamva waqinisekisa oku kwiblogi ebhalwe kwi-Bitcointalk iposti yeforum in 2009, "I zemba ibhloko 70-into, kwaye mna umamkeli yokuqala Bitcoin intengiselwano xa Satoshi wathumela eziinkozo ezilishumi kum njengovavanyo."
UFinney naye wayengumntu wokuqala weposi malunga neBitcoin nge-11 kaJanuwari 2009 kwaye ifundeka ngolu hlobo, “Running bitcoin”. Wasweleka ngenxa yesifo esingaqhelekanga ngo-2014.
Ngaphambi kukaFinney, uSatoshi Nakamoto wayengowokuqala ukumba ibhloko yokuqala yeBitcoin nge-3 kaJanuwari 2009 kwaye waqala inkqubo yemali yedijithali yeP2P kwaye ibhloko yesibini yembiwa nguFinney.
Sekuyiminyaka ukususela ekuqaleni kweBitcoin yadalwa, kwaye kuninzi okwenzekayo ukususela ngoko.
Bitcoin Pizza Usuku
Nangona kunjalo, imeko yokusetyenziswa kwangempela yabhalwa okokuqala kwi-2010, xa uLaszlo Hanyecz wathenga iipizza ezimbini zikaPapa John kwi-10,000 BTC. Ixabiso lepizza ezimbini lalimalunga ne-$40. Esi yaba sisiganeko esithandwa kakhulu kwaye minyaka le 22 May ibhiyozelwa njengoSuku lweBitcoin Pizza luluntu lwe-crypto kwihlabathi jikelele.
Incwadi yembali yeBitcoin irekhode le ntengiselwano njengentengiselwano yokwenyani eyenziwe kunye nenkampani yangempela.
Namhlanje, ibhaso le-10,000 le-BTC lijikeleze i-419 yezigidi zeedola, njengoko kuthengiswa Klever Shintsha.
2010 ukuya 2020
Emva kweminyaka elishumi elinanye yokusebenza, i-BTC ibonakaliswe njengenye yetekhnoloji kuphela enokumelana nawo onke amahla ndinyuka ehlabathi.
Ekupheleni kwe-2010, ixabiso le-BTC enye laphuma kwi-$ 0.0008 ukuya kwi-$ 0.83, kwaye lijonge impumelelo, iiprojekthi ezininzi ze-crypto ezisekelwe kwi-blockchain zaqala ukuvela. Ngenxa yoko, iteknoloji yayinenkxaso eyayiyifuna, ngenxa yokuba kwakukho abakhuphisana nabo kwi-BTC.
Kwi-2012, i-BTC yathintela i-dollar entsha ye-250 nge-BTC, kunye nenkqubo entsha yokulinganisa ebizwa ngokuba yi-milliBitcoins (mBTC), i-microBitcoins (uBTC), kunye ne-Satoshis yaziswa.
Abaninzi bathi emva kokuba inethiwekhi ye-BTC iqalile ukusebenza kwaye iziphumo ezifunwayo zidibene, uSatoshi wadlulisela onke amalungelo kuluntu, oluqhubeka luqinile. Nanamhlanje, akukho mntu uyazi ukuba uSatoshi Nakamoto wayengumntu okanye iqela. Leliphi ilizwe yena/iqela awayekulo, igama livakala njengelaseJapani, kodwa abanye baphikisa ngelithi uFinney waye Satoshi.
Uphando oluninzi lwenziwa nguSatoshi xa begqiba ukukhawulela ukunikezelwa kwe-BTC kwi-21 yezigidi kuphela. Ngeli xesha, ubutyebi behlabathi bubonke babumalunga nama-300 eebhiliyoni zeedola. USatoshi wayekholelwa ukuba i-BTC enye iya kufikelela kwi-10 yezigidi zeedola kwaye iya kuba yanele ukuba yabelwane phakathi kwabemi behlabathi.
Namhlanje, ngaphezulu kwe-18.92 yezigidi zeBitcoins zombiwe, zishiya kuphela ngaphezulu kwe-2 yezigidi ezikhoyo zokwembiwa.
Phakathi kwe-2013 ukuya kwi-2015, i-BTC ijongene nokuguquguquka okukhulu. Ukunyuka ukuya kwi-1164 yeedola nge-BTC ngoDisemba 2013, i-BTC yawela kwi-low entsha ye-315 ye-BTC nganye.
Kwi-2016, i-BTC iphuculwe kwaye yachukumisa i-$ 959 ngoDisemba, kwaye kamva ngo-2017, yafikelela kwi-$ 19,000, ngaphambi kokuwela kwi-3200 yeedola kwi-2018.
Ngo-2019 kunye no-2020, i-BTC yabona ukunyuka ukuya kwi-7122 yeedola nge-BTC kwaye yachukumisa i-18353 yeedola nge-BTC ngoDisemba ka-2020.
Uphuhliso olukhulu lweza ngo-2021 phakathi kwesibetho xa umhlaba wawuqonda ukubaluleka kobuchwephesha obunabileyo.
NgoJanuwari 2021, i-Bitcoin yachukumisa i-$ 40,000 kwaye xa umphathi we-Tesla, u-Elon Musk wachaza ukuba inkampani ithenge i-BTC ye-1.5 yeebhiliyoni zeedola, imarike yachukumisa i-$ 50,000. Emva kweenyanga ezimbalwa, uTesla uphinde wachaza ukwamkelwa kwe-BTC yokubhukisha imoto, nangona ekhankanya iinkxalabo zokusingqongileyo, kamva, wayihoxisa.
Ngo-2021: I-El Salvador ibhengeza i-BTC njengethenda esemthethweni
Ukuza kuthi ga ngoku, i-BTC yayijongwe kuphela njengemali yedijithali yabucala, kodwa emva kokubhengezwa kwe-El Salvador ngoJuni 2021 ngumongameli uNayib Armando Bukele Ortez ukuba i-BTC inikwe ithenda esemthethweni kweli lizwe, izinto zaqala ukuqhubela phambili.
NgoSeptemba, xa i-bill ipasisiwe yi-El Salvador yamkela i-BTC njengethenda esemthethweni, i-BTC yayirhweba kwi-66,971 yeedola kunye ne-capitalisation yayo yemarike yayide yawela i-$ 1 yezigidigidi ngelo xesha.
Ukususela kwi-BTC yokuqala ukuya kwiibhiliyoni zeebhiliyoni zemihla ngemihla ekurhwebeni, akukho kumisa kwi-BTC. Kuye kwaba ligugu kunye nenkokeli engenakuphikiswa ekwamkelweni kwe-cryptocurrency, mhlawumbi ndithi iteknoloji ye-crypto kwihlabathi namhlanje.
USatoshi kunye noluntu lweBitcoin lusebenze Kleverly iminyaka kwaye iya kuba sisibane kubo bonke abafuna ukutshintsha ihlabathi ngokongeza ixabiso kwitekhnoloji esinayo namhlanje.
Akukho kalo 5 Iivoti: 2